Carl Bildt oo lagu dhaleeceeyey hadal la xiriira geeridii Ariel Sharon - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carl Bildt iyo Ariel Sharon. Sawirle: Markus Schreiber/Oded Balilty/TT
Carl Bildt oo lagu dhaleeceeyey hadal la xiriira geeridii Ariel Sharon
La daabacay måndag 13 januari 2014 kl 09.10
Wasiirka arrimaha dibedda Iswiidhen Carl Bildt ayaa lagu dhaleeceyey hadal uu ku ammaanay raysalwasaarihii hore ee Israa’iil oo geeriyoodey sabtidii na soo dhaaftay. Carl Bildt wuxuu boggiisa Twitter-ka ah ee Internet ku qoray in ”Sharon uu hoggaamiye weyn ee dalka Israa’iil, iyo abaalduule ciidan oo heer sare ah, iyo weliba hoggaamiye siyaasadeed oo caqli badan oo arkay ahmiyadda nabadda”.
Sharon ayaa ahaa hoggaamiye si kala duwan loo arko. Dad badan oo israa’iiliyiin ayaa jeclaa, in kastoo lagu tilmaamay in uu ka mid ahaa dadkii mas’uulka ka ahaa xasuuqii dadka falastiiniyiinta ee ka dhacay xeryaha qaxootiga ee Sabra iyo Shatila oo Lubnaan ku yaal sannadkii 1982.
Carl Bildt ayaa sidaan uga faallooday dhaleeceynta loo soo jeediyey:
- Waxaa jira dad aan marnaba wax wanaagsan ka sheegin Israa’iil oo wax madow uun ka sheega. Aniguna kama mid ahi dadka noocaas ah. Intaas kadibna waxaan qabaa in ay wax wanaagsan tahay in qof marka uu geeriyoodo wanaaggiisa hoos laga xarriiqo.